हङ्गेरियासँग साक्षात्कार - हंगेरी, अष्ट्रेलिया र ब्राजीलका लागि सिफारिसहरू। - 1aviagem.com
हङ्गेरियासँग साक्षात्कार - हंगेरी, अष्ट्रेलिया र ब्राजीलका लागि सिफारिसहरू।
अघिल्लो पोस्ट: बेलारूस बेलारूसी नागरिक द्वारा
अर्को पोस्ट: सुझावहरू - मलेशिया - बाटू गुफाहरू
पोष्ट गरिएको9नोभेम्बर 2018 1 टिप्पणी द्वारा रोमोमो लुकाना
त्यसैले आज हामी एक व्यक्तिसँग कुरा गर्न जाँदैछौं, कम्तिमा उत्सुक। उनी हंगेरीमा जन्मिएका थिए, चीनबाट पारित र अष्ट्रेलियामा बस्छ! र भर्खरै ब्राजिल र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा भ्रमण गरियो। म आज क्रिससँग कुरा गर्दै छु।
हामी फिनल्याण्डमा सुरु भएको र जर्मनीमा अन्त्य भएको भ्रमणको क्रममा भेट्टाए, रूसबाट गुजरिरहेको थियो। म केवल ब्राजिल थियो, र त्यो मात्र हङ्गेरिया थियो।
हामी मूलतः बसमा भेट्यौं। त्यो एक अनोखा व्यक्ति हो जसले बलियो इच्छाको साथ र राम्ररी संभाल गर्न सक्छ। उहाँ नयाँ भाषा सिक्न सजिलो छ र विभिन्न देशहरूमा बस्नुभयो। त्यो पनि एक पालतू जनावर छ, सानो घोडा, म भन्छु, एक ठूलो कुकुर। उहाँ धेरै सुन्दर र साँच्चै राम्रो हुनुहुन्छ।
त्यस भ्रमण पछि हामी अहिले सम्म सम्पर्कमा रह्यौं किनकि समय क्षेत्र बिना। र त्यो पनि ब्राजिल भ्रमण गर्थे, जहाँ हामी फेरि भेट्छौँ र चीजहरू सम्म पुग्न सक्छौं। साथीहरू सधैं हेर्न राम्रो छ। म आज क्रिससँग कुरा गर्दै छु।
यो ब्लगको साक्षात्कारमा सामान्य रूपमा पाठको रंगहरू परिवर्तन हुनेछन्। मेरो रंग हरित र क्रिस रङ रातो हुनेछ। चलो?!
1- क्रिस, तपाईं कहाँ जन्मे र आज तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ?
म बुडापेस्ट, हंगेरीमा जन्मेको थिएँ। म आज ब्रिस्बेन अष्ट्रेलियामा बस्छु।
2- तपाईं कहिले चल्नुभयो?
- जब म6महिना पुरानो थियो जब म जान्छु।
3- हंगेरीको बारेमा तपाईलाई राम्रो मनपर्छ?
खाना र पेपरिका। तपाईं अष्ट्रेलियामा यहाँ रहेका चीजहरू त्यहाँ जस्तै स्वाद छैन।
4- यदि तपाईं हंगेरीमा के परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ?
- म अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्नेछु। कम वेतन र उच्च मूल्यहरू ...
5- तपाई हंगेरीमा भ्रमण गर्न वा भ्रमण गर्ने पर्यटकको लागि के सिफारिश गर्नुहुन्छ?
"बुडापेस्ट, यो धेरै पूंजी शहरहरू जस्तै छैन। त्यहाँ धेरै र हेर्न को लागी छ। तपाईं साँच्चै कुनै जल्दीमा हुन आवश्यक छ। ईज जस्तै उत्तरी क्षेत्र प्रस्ताव गर्न धेरै छ।
6 - र अष्ट्रेलियाका लागि, तपाइँसँग कुनै सिफारिसहरू छन्?
- कुनै पनि अन्य देश जस्तै तपाईं खतरनाक थाहा पाउन र यात्रा गर्नु अघि राख्नु पर्छ भन्ने जान्नु अघि तपाईं अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। उदाहरणको लागि, धेरै क्षेत्रहरूमा मगरकोट ठूलो समस्या हो। तर दन्त वन र महान बैरियर रीफ अविश्वसनीय स्थानहरू छन्।
7- अब ब्राजिलको बारेमा बोल्दै, तिम्रो जिन्दगी कस्तो थियो? के हामी केहि पनि सुधार गर्न सक्छौं? तपाईंको सामान्य धारणा के हो, के तपाईंले असुरक्षित महसुस गर्नुभयो?
- म आउन र तपाईलाई भेट्न खुसी छु र अमेजन भ्रमण गर्न मन लाग्यो! तर मैले साओ पाउलो र रियो शहरहरू असहज भए। तपाईंले यी बारे सुन्नु भएको पहिलो कुराहरू अपराधहरूको समाचार हो। हामीलाई धेरै कथाहरू (बाटोमा) भनिएको छ कि कि त वास्तवमा हो भने वा हामी हाम्रो डरलाई ईन्धनको रूपमा सेवा गर्दैनौं।
8- मलाई थाहा छ ब्राजील को बारे मा केहि फिलिमहरु देखी, कस्तो प्रकार को फिलिमहरु? के तपाईंलाई कसैको नाम सम्झन्छ?
"उहा, परमेश्वरको शहर तिनीहरूमध्ये एक थियो।
9 - र तपाईंले ब्राजिललाई थाहा थियो कि फिल्महरूमा चित्रण गरिएको जस्तो थियो?
"म favela मा गएन। म जान चाहन्छु, तर यो जिज्ञासा बाहिर थियो। एकै समयमा यो स्थानीयहरूलाई निराशाजनक हुन सक्छ। र तपाईंले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तपाईं त्यहाँ एक्लै जानु हुनुहुन्न। (आई.ए.
- हो, म वास्तवमा यो गरे, तर पनि व्यक्तिले चुनावको समय रोकोमा जान चाहन्छ! (सबै तान्नुको साथ, ठाउँको रूपमा पनि छरितोभाषी हुन सकेन) अर्को पटक मैले पनि तिम्रो साथमा जान्छु, तर त्यसबेला यो सुरक्षित थिएन।
10: के तपाई अरु केहि भन्न चाहानुहुन्छ? हुनसक्छ संसारमा एउटा सन्देश! त्यो यो ब्लगमा राखिनेछ।
- यदि म ब्राजिलको खतरनाक बारेमा पनि चेतावनी दिएको छु भने पनि स्थानीय गाइड मैले सिफारिस गर्छु कि मानिसहरूले सुन्नेछन्, तर केवल सल्लाहको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, त्यो तपाईंको मनमा धेरै अधिक नदिनुहोस्। यदि तपाईं धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ भने भ्रमण गर्नुहुन्छ र यसले तपाईंलाई सवारीमा रमाइलो गर्न मद्दत गर्नेछ। म अमेजन अधिक भ्रमण गर्न सिफारिस गर्नेछु, यो त्यहाँ अद्भुत छ। मलाई थाहा छ यो धेरै देशहरू समाविष्ट गर्दछ, तर म ब्राजिल र पेरुवाईमा भएको हुँ र मैले साँच्चै मजा आयो।
तपाईंको ध्यानको लागि धन्यवाद।
- साक्षात्कारको लागि धन्यवाद।
"म तपाईंको यात्रा घरमा राम्रो फिर्ती चाहन्छु।"
र यहाँ हामी अर्को साक्षात्कारको अन्तमा आउछौ।
बन्द गर्नु अघि म प्रतिबिम्ब छोड्न चाहन्छु:
हालैमा ग्लोबो सञ्जालले "ब्राजिल जुन म चाहन्छ" को अभियान बनाएको छ, जसमा ब्राजिलले भने उनीहरूलाई भविष्यका शासकहरूको बारे कस्तो आशा गरे।
तर, म एक फरक अभियान सुरु गर्न चाहन्छु: "ब्राजिलको प्रभाव भनेको म छोड्छु?"
तपाईंले यस साक्षात्कारमा देख्नुभएको छ कि हिंसा बारे धेरै कुरा बारे कुरा गरिएको छ र अहिले पनि पर्यटकहरुको लागि छ। समेत चलचित्रहरूमा छापिएको छाप जुन ब्राजिल एउटा खतरनाक स्थान हो। उनले चलचित्र "भगवान शहर" को उद्धृत गरे, तर म यसलाई "कार्न्दिरु", "एलीट स्क्वड" आई र II को लागि सूचीबद्ध गर्दछु। "पर्यटक" र यति।
मलाई लाग्छ कि ब्राजिलियनले हामी त्यो परिवर्तन गर्न सक्दछौं। र म विशेष गरी ब्राजीलियहरुको कुरा गर्छु जसले विदेश यात्रा गर्दछ, चाहे काम, पर्यटन वा अध्ययनको लागि। तपाईं ब्राजिलको छाप कस्तो छ? "
यदि तपाईं पहिले नै टिप्पणीहरूमा छोड्नु हुन्छ भने तपाईले संसारबाट बाहिर निकाल्ने कस्तो प्रभाव पार्छ। र यस अभियान को हैशग #ImpressaoBrasileira संग साझा गर्नुहोस
ब्राजिलमा थुप्रै सुन्दरता, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, गेस्रोनोमिक छ, र मलाई विश्वास छ कि तिनीहरू डरको यो लहर भन्दा बढी छन्। के हामी ब्राजील देखाएको बाटो परिवर्तन गर्न जाँदैछौं?
अर्को पटक मैले पर्यटकलाई रोकोमा गर्न सक्दिन कसलाई थाहा छ? (के तपाईं मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ?)।
आगामी पोस्टमा मैले ब्राजिलमा पर्यटकहरू प्राप्त गर्ने अनुभवबारे कुरा गर्छु।
यसका थप पोष्टहरूका लागि, केवल तलका विश्व नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्।
साक्षात्कार अमेज़ोनिया अष्ट्रेलिया ब्राजिल budapest भगवान शहर अपराध डेंटीय यदि साक्षात्कार favela ठूलो बाधा चट्टान हंगेरी ब्राजीली राजकुमार मुद्रण सेवा डर रूस सिफारिसहरू कुलीन सेना पर्यटक
1 टिप्पणी	टिप्पणी छोड्नुहोस् >
Pingback: हामीले एक मेक्सिकन महिलालाई अन्तर्वार्ता लियौं र मेक्सिकोमा कोरोनाभाइरस सिफारिसहरू र सुझावहरू ल्यायौं - 1aviagem.com